Mahofisi Ekuchengetwa muDhaibha nokuda kwevanotsvaka basa muUAE 🥇
Mahofisi Ekuchengetedza ku Dubai
Yekuunganidza maAgency muDubai nekuda kweichi chikonzero Dubai City Kambani, kwechinhu chimwe chete, iri kukwanisa kukubatsira. Kazhinji kutaura, takagadzira email yakazara uye kero rondedzero yeVashandi vekurairidza muDubai, Headhunters muDubai uye Abu Dhabi uye matareji ekutsvaga kutsvaga avo vari kuunganidza muGulf uye Dubai. Mukudaro, tinoedza kuwana zvakawanda zvakadai sezvatinokwanisa kubva kune umwe neumwe muchengeti kuMiddle East kuti akubatsire kuwana basa kuMiddle East. Recruitment agencies in Dubai list yakapiwa neDhailand City Company inofanira kukubatsira kuwana Dubai Job.
Isu tava kubatsirawo vanhu kuti vatange kunyoreswa nefoni yepamusoro kunyanya kumabasa ekuIndaneti. Tiri iye zvino achibatsira kuwana mabasa efoni kubva kuIndia nePakistan pamwe neSouth Africa nePhilippines. Sezvazviri, iwe unogona kunyora mashoko ako nekambani yedu. Uye uwane izvozvo kurota basa muUnited Emirates. Iva wakachenjera uye shanda zvakanaka paCV yako wozotumira kune kambani yedu.
Pasi pemamiriro ezvinhu iye zvino achibatsira kuwana basa muUAE. Kunyanya kune nzvimbo dzakasiyana-siyana kudarika United Arab Emirates. Kunze kwekutsvaga masangano ekugadzirira ku Dubai. Iwe unofanirwawo tanga kutsvaga mabasa pane kufamba mumubvunzurudzo mu Dubai. Mukufamba kwenguva, tarisa pane izvo kambani yedu inogona kukupa iwe.
Zvose mazita eAgence Agencies ku Dubai
The Dubai City Kambani yakagadziridzwa mirayiridzo yemabasa muUAE ine nhamba yakakwana yevanoshanyira ku Dubai. Tariro iwe uchawana basa muUAE. Kunyanya nebhuku redu rakakwana revatori veUnited Emirates. Muhutano iwe pachako uchava neshamwari yakananga. Tumira CV kugovera vatariri ku Dubai. Imwe yemakambani, unofanira kutanga watarisa kune makambani makuru ekubhadhara. Uye isu tine a Careerjet career search portal uye Inowanikwa pakati peIndia a Monster job portal. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Tumira CV yako kune imwe yemasangano ekugadzirira ku Dubai.
Ndapota Fona kuri Icon kuti uende kuzere rakazara !.
Masangano ekuchengetedza ku Dubai
I Dubai City Company yaita kutsvakurudza nezvekugadza vatungamiri. Uye nezvozvi mupfungwa, takasarudza makambani akakurumbira ari kushanda kuMiddle East. Iwe semutsvaga wekutsvaga basa unofanira kunyatsoona izvo vashandi ndivo vakanakisisa. Saka tarisa kuti sangano rekushandira ndiro rakanakisisa muUnited Emirates. Hope iwe uchawana maonero akajeka emudzidzisi wega wega.
Pano unogona kutumirazve runyararo rako nekunyora!
Iro zita remuchengeti: Bhinda neCV Adresse E-mail:
Mahofisi Ekutora Chikamu chechina 2
Expo 2020 https://www.expo2020dubai.com/careers Email haina kupihwa
Mahofisi Ekutora Chikamu chechina 3
Saizvozvowo, kuA Dubai misika yebasa vashandi uye sangano rekuchengetedza basa, Hays yakafanana nedzimwe muchengeti uye mubatsiri webasa muUAE. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, Hays muUAE inonyanya kushandiswa kwebazi rekushandira. Ikoko vari kutarisira mabasa muDubai ePhilippines expats. Mukufamba kwenguva, kambani inounza ruzivo rwakakosha kuMiddle East iyo yose ye vanotsvaka basa vanogona kubatsirwa nayo. Zvichipa pfungwa idzi, Hays ane boka rinoshamisa rinoshushikana revatungamiri nevatariri vakuru muUAE. Kutaura muchidimbu kambani inobatanirana zvikuru neMiddle University in Dubai.
Bata Hays Recruiter Agency muUAE
Pakutanga, mahedheni akaisa vhidhiyo yekusimudzira. Nguva ichangopfuura kana gare gare Hays kuMiddle East ichakupa pfungwa yekuti chii chakafanana kushanda muDaily City Area. Kana uchangotumirazve rutsigiro kuboka rekushanda, iwe unogona kutsvaga kuwana basa uye hupenyu hwehupenyu mukutsvaga basa. Pakati pe Dubai kubatanidzwa, Hays kambani yave yakajaira vashandi vemunyika dzakawanda vanobva kuIndia, Pakistan, Europe, uye US
Kune rumwe rutivi kutarisa zvinoita kuti Hays ikwanise kuve yakanaka muMENA. Usati wawana iro rakanakisisa junior kune vatungamiri vakuru vakuru. Hays nguva dzose vanotarisa nokuda kwematarenda matsva kubva kumusika wepasi rose. Kuti uzviise nenzira imwe, unofanira kuedza kuva chikamu cheboka reH Hays muUAE. Kana kuti zvingave zvakatorwa navo uye iva nechokwadi chokuti iwe uchapinda mukutaurirana nevamiriri veHaws vachitsvaga.
HAYS - Mapurisa ekugadzirira ku Dubai
Danai: + 971 (0) 4 559 5800
BAC Middle East Mahofisi ehurumende muUAE
Ichokwadi kuti BAC Middle East ndiyo inonyatsozivikanwa uye sangano rekutsvaga rekutsvaga revakuru vakuru vashandi. Zvechokwadi nezvozvi mupfungwa, BAC yekuongorora mazano muUAE ndeye imwe yekambani yakanakisa kutumira CV. Ihwo huzhinji hunopupurira hunoratidza kuti iyo kambani inonyanya kuita mubasa rekutsvagas ndechekuti BAC yakasimbiswa mumakumi emakore adarika uye iyo yaiva 1979. Pamusoro pezvakanaka, BAC Middle East yave iri pane zvose zviri mberi vashandi muzvikamu zveUAE.
Kusiyana nemamwe makambani ekutsvaga BAC anotarisira zvakare maitiro ekushanda kwemakore anopfuura 30 munharaunda yeMENA. Panguva imwecheteyo, kambani inova yekutanga yakasimba munyika iyo yakawana ISO9001 certification kubvira pakutanga kwekushanda. Kune rumwe rutivi ruoko rwakananga kufungidzira kwekutanga, muzvokwadi, inokurudzira kugadziriswa kwebasa mumabasa eMa Dubai uye kununura unhu hwakanaka hwekutsvaga uye kugutsikana kwevatengi muUAE.
BAC Yezvikwata Zvokutora ku Dubai
Danai: + 971 (0) 4 439 8500
ManpowerGroup Job mu Dubai
Kuchengetedza uye Kushanda Mabasa
Pamusoro pevashandisi vose muDhailand City ManpowerGroup nekukurumidza kuva mutungamiri wokutsvaga muUAE. Mukuda kwekugadzira webhusaiti yepamusoro yebasa uye kutanga zvinyorwa zvekuregeresa maitiro yekutengesa motokari yevashandi vemagetsi. Mune tariro yokuti munhu ane simba ichabatanidza zvinogona kuitwa nevanhu mu 2018-2019 kune bhizinesi rakasimba kwazvo.
ManpowerGroup inoshumira panguva imwechete masangano makuru uye mashoma kudarika United Arab Emirates, Qatar, India, Canada uye United States. Sezvakangoitika, kunyora uku kwakasimba kwezvinhu zvose zvemabhizimusi muUAE uye kuitira kushanda muEurope muPoland. Kuti tisati taura nezvezvinhu zvina zvikuru muUAE. Company offerings yepamusoro-soro yokubhadhara basa ku Dubai neAud Dhabi makambani. Uyezve, zvigadziriswe zvinogadziriswa ndezvokuva nyanzvi mune Manpower misika nekubhadhara kutonga kwakanaka.
Apo ManpowerGroup inoshanda
Pakutanga, ManpowerGroup inoshanda chete munyika yose. Mufashoni imwecheteyo, iyo kambani ine mahofisi emahofisi ekutsvaga munyika dzinopfuura 80. Pamwe pamwe nekunzwisisa kwenyika uye ruzivo pamusoro pemakambani eUAE ekutsvaga mari. Uyezve nemakore anopfuura 20 ounyanzvi mumusika wemabasa. ManpowerGroup zvakare inotanga kuve nevakabatana muUAE. Muchiedza chevatsvaki vemabasa vanofarira kukurumidza kuita mabasa avo nekupazve huwandu kuManpowerGroup. Pamusoro pe85% yevatsvaki vemabasa vanosimudza unhu hwavo pachavo kutsvaga basa muUAE.
ManpowerGroup yebasa mukutungamirira
Ndizvo izvi mupfungwa muManpower Group kuwedzera kwehuwandu hwehutano mu Dubai. Pamusoro pevose kambani yakasimuka 35% inobudirira mune yekutsvaga mari yehuwandu hwebasa ravo rose. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, hurongwa hutsva neManpowerGroup hunosanganisira nyore nyore kupinda mukana nekugadzirisa kuongorora ne MBA yevatsva vashandi vekutsvaga basa. Panzvimbo isina kunaka, kambani inomira kuenderera mberi muKatar uye kwete kuwedzera kwevashandi vanobvunzurudza ikoko. Asi pane zvakanakira Manpower achiri kushandura mabasa emabasa yekutarisira basa muBud Dhabi.
Danai: + 971 (0) 4 391 0460
Robert Half UAE Mabasa & Kuchengetwa muDhailand uye Abu Dhabi
Zvechokwadi mumwe wevanonyanya kuverenga ku Dubai uye Abu Dhabi, kuratidza kutsvaga kwemabasa mu Dubai 2018. Uye kushanda kwemabasa ekufambisa muUAE. Chinhu chokutanga kukuyeuka chinogona kukurumidza uye nyore kutsvaga nzvimbo dzakasununguka muBud Dhabi. Pamusoro pezvakanaka tsvaka rimwe basa rinoenderana nemararamiro ako. Mukuyera bvunzo hunyanzvi hwako uye Middle East ruzivo mune yakanakisa Abu Dhabi Recruiter. Semufananidzo weanonyatsoteerera Robert Half akagara achivhura mabasa pawebsite yavo nePorbes yepamusoro makambani muDubai uye Abu Dhabi nharaunda. Mukupedzisira analysis jobs vacancies naRobert Half vakamirira kuti iwe utore.
Vashandirwi vehurumende muDhailand - Robert Half.
Danai: + 971 (0) 4 325 9980
NADIA Recruitment Agency muDhailand
Sezvakaratidzwa Nadia kuunganidza vanoita zvinhu zvakawanda mumamiriro ekudzidzira mukati mushamba wemabasa muDhaibha, Abu Dhabi, uye Sharjah. Muchidimbu pfupi, Nadia nekugadzirira nekugadzirisa mazano vane mabasa anotyisa kwazvo muDhaibha. Kutaura muchidimbu kambani yakagadzira vatengi vanovimba muUAE. For kupfuura makore 30 aHR anowanikwa muDhaibha uye mukati memakwikwi Arabhu misika yemunharaunda. Kwose Nadia HR kambani inopa huwandu hwekushandira basa.
Kamwe chiduku mumakambani ekupedzisira yakagadzirwa mu1983. Kusvikira panguva ino, iyi dare rekushandira ku Dubai uye Abu Dhabi nekukurumidza kuva guru uye rakakosha pamusoro pe4.70 neGoogle Jobs yakawanda yakabudirira Human Resources Recruiter muGulf region.
Shandisa pawebhu: http://nadia-me.com/candidate/index.cfm
Michael Page Recruitment and Jobs mu Dubai
Mune tariro iyo iwe uchawana a Dubai Job, anotsanangura kufunga kuti aende. Nechinangwa ichi iwe nemhuri yako chisarudzo chikuru. Uri achienda ku Dubai mutariro kuti yako sarudzo ndiyo chaiyo, nekuda kweichi, sarudza kambani yakanaka. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, iwe unofanirwa kuita chisarudzo mushure mekufungisisa nekufungisisa kwe makambani ekutsvaga muUAE.
nekuti IUEE Job marcasi haisi nyore mu2019. Pamusoro pezvakaipa musati matamira munzvimbo itsva zviri pachena nyora nevanosarudza ku Dubai. Zvadaro zvinhu zvose zvinofungidzirwa zvichava kwauri kana iwe uchitumirazve kuUAE recruiters. Michael peji yakanaka pakati Masangano ekuchengetedza ku Dubai.
Michael Page uye Middle East nzvimbo
Kazhinji Michael Michael Page iyo yose inosarirwa zvinodiwa nevatsvaga basa muUAE. Yakabatanidzwa nemakambani kuti vawane zvidimbu zvakakodzera zvemashoko. Uchinyatsoteerera, Michael Page nguva dzose anobatsira vashandi vebasa kuti vashandise basa kunoshandiswa munyika yose yeArab market. Kusimbisa kushandiswa kwevatariri muMiddle East kambani yakagadzira nyore nyore kupora chikamu chekupa basa vanotsvaka a kunzwisisa kwakadzama pamusoro pemararamiro evanoita basa muUAE.
Chero bedzi iwe uchivatumira kuti vadzoke zvakare kana kuungana navo WhatsApp unogona kutanga kushanda kuMiddle East. Nezvozvi mupfungwa, iwe uchaziva kuenda ku Dubai kumabasa. Vose veUAE vanowana basa vanogona kuwana mazano pamusoro pematare ebhizimisi muDhailand City. Kusanganisira kubatsirwa kwekugara muUAE, zvivako uye ruzivo rwakakosha pamabasa ekusimudzira ku Dubai, zvikoro uye varaidzo yevana vako, nzira yokuzarura kambani yebhangi Dubai uye mhete yekodhi yepamusoro yekugara muUAE.
Danai: + 971 (0) 4 709 0300
Munyaya iyi, Dubai City Company inopa sangano rekutsvaga uye rekushandira basa muGCC. Pamberi pevatungamiriri venyika uye Basa reH HR nemabasa kuMiddle East. Pasi peAdecco mararamiro emabasa ekutsvaga basa, vanotora rubatsiro rwekuwana rubatsiro rwemabasa avo enyika. Kusvikira panguva ino, kune zvakawanda kupfuura 14,000,000 inyoresa vakatsvaga vakachinja upenyu hwavo muUAE.
Nguva yakareba sezvo iwe uchida kukwirira kwebasa rako ku Dubai pasina kunono iwe unofanira kufambidzana ne HR Managers muAdecco company. Nenguva nenguva kambani inobhadharwa neChipatitari Careers saizvozvo vashandi vekushanda vanogona kuwana basa risina basa kune vashandi vePakistan yakanyorwa panzvimbo yebasa reAdecco. Iyo kambani ndeyemakambani makuru ekubatira mu Dubai, hapana mibvunzo yakabvunzwa. For chinangwa chekutsvaga basa iyo kambani inokupa iwe unogona kuchinja nyika yako. Nokuda kwechikonzero ichi neAdecco, unogona kuvandudza nzira iyo vanhu vanoshandira muUAE. Adecco imwe iro rakanakisisa pakati pevashandi vekushandira mu Mumbai.
Adecco services muUnited Emirates
Sezvinei, Adecco inopa mabasa akasiyana-siyana ekubhadhara mabasa muEurope, Qatar, US, Canada, Asia. Nechinangwa ichi Adecco kubatanidza basa vanovhima nevashandi. Vasingatauri zvinopfuura 650,000 vanoda kutsvaga kutumira zvakare kuburikidza nemukuru wevashandi mazuva ose. Mukuwedzera kumabasa ekutsvaga mazano anopiwa neAdecco kambani yakawanda mapoka akasiyana yebasa raunogona kuwana Dubai Jobs. Usingarevi mamwe mavhisi akadai sekugara kwekugara muDhailand, basa rekuchinja kubva kuIndia nePakistan kusvika kuUAE. Uyezve, shandura tarenda kukura mukati meimba. Mushure mezvose, kambani inonzi No.1 nevatsvaga vanobuda kuEurope uye basa rokukurukura kuSaudi Arabia uye UAE.
Engineering jobs vacancies.
IT & Telecom basa muUAE.
FMCG & Retail vacancies muBud Dhabi.
Nhepfenyuro & Zvekutsvaga Zviitiko muKatar.
Danai: + 971 (0) 4 368 7900
Robbert Murray Job Consultancy kune International Job Seekers
Robbert Murray Top Recruitment Agency muUAE. Kwete imwe chete vatungamiri vakanakisisa mu Dubai asiwo tarenda yakanaka yekutsvaga. Robbert Murray nokuda kwechinangwa chekambani yekuzivikanwa yekambani yekambani yakakwanisa kumuka kune dzimwe nyika kushandira. Kuti uzviise imwe nzira, muchengeti akagadzira nzvimbo ino yebasa reDazazine nzvimbo inokosha iripo mumushandirapamwe wemari. Kazhinji kutaura, kambani huru chinhu ndechekubatsira kukura vatsva vatsva muUAE.
Mukupedzisa, Robbert Murray ndomumwe wevatungamiri vekutora makambani muUAE kuti iwe unofanira kunyora with. Mukufamba kwenguva, kana iwe taurirana nevanochechera iwe ucharova mabhii makuru mukati mapoka emarudzi akawanda muDhailand uye London. Kusvikira pakuguma kwese pane chero zvipi zvese basa basa risati riripo ndeyokuti Qatar, Saudi Arabia, United Kingdom kana kumativi ose enyika kutumira CV kuna Robbert Murray.
Robbert Murray sangano rebasa muUnited expertise
Zvapiwa pfungwa idzi, sangano rakagadzira Linkedin yakazara Middle East kutora HR network. Muchidimbu, zvachose ivo vari munzvimbo dzakasiyana-siyana kumativi ose enyika kuitira kuti mugone kuzarurirwa basa repasi rese. Inofanira kuyeukwa kuti unyanzvi hwekushandira wekambani iyo inoiisa mu nzvimbo yakakwana yekubatsira vashandi vekushanda pamwe chete. Pamusoro pezvakanaka kune zvakakodzera headhunter muDhaibha vachibatsira vamwe vashandi kuti vawane zvavanoda uye vagoiswa muUAE.
Senyaya yechokwadi, izvi Basa rekushanda rinobatsira expat mukadzi ane hukama ku Dubai. Uye pamwe nevanonyanya kukodzera vakakodzera uye kuita mabasa akasiyana mumakambani evanhu vakawanda vanogara kuMiddle East. Kusvikira pakupedzisira sangano rebasa reRobbert Murray muDhailand riri kubhadhara kubva ku1995 uye rine mabasa akanaka pamusana pezvavanoda mu Dubai City.
Danai: + 971 (0) 4 381 7473
Inspire Selection - Leading Recruiter muDhailand, UAE
Kunyangwe izvi zvingave kusarudzwa kwechokwadi kunofadza ndeimwe yekunakisisa webasa rekushandira uye webasa rekushandisa mu Dubai. Kune rumwe rutivi rwechinangwa cheKutora. Inspire Selection Agency muUAE inobatsira pane 3,000,000 vatengesi vanotsvaga kuwana mabasa muUAE. Mune tariro yokuti vakawanda vanozowana vachawana mamwe mabasa ekubatsira uye mikana yebasa neyo nzvimbo yebasa ku Dubai. Nokuda kwebhizimisi yekutsvaga muMiddle East, hazvisi nyore isu takawedzera izvi UAE basa portal kuti ibatsire Dubai vashandi vashandi vanowana basa nokukurumidza.
Zvekuchengetedzwa kwehurumende mu Dubai - Inspire Selection.
Danai: + 971 (0) 4 368 0852
Randstad Kubhadhara uye HR Services kuMiddle East
Masangano ekuchengetedza ku Dubai Kuti ave sangano rakanaka rekutsvaga muMENA. Randstad achikwira pamusoro peUAE vachengeti vehurumende vanotengesa. Nokuda kwechikonzero ichi, kambani yakasikwa iyo yakanakisisa yevashandi vekutsvaga nzvimbo yeIndia munyika. Pakazowona zvakanaka kuwana basa muRandstad, zviri nyore. Kazhinji katsvaga webhusaiti inoputika nehukuru nyanzvi yekutsvaga mazano.
Rega basa rinodiwa mu Dubai vashandise pavanenge vachitsvaga basa kuMiddle East. Chimwe chinhu chinokosha neRandstad kana uri kutarisa kuti uve muchengeti. Kazhinji kutaura, kambani inopa basa rine mubayiro muHurumende Indasitiri yekutora kwete muUnited Emirates chete. Kutaura muchidimbu iwe unogona kutora basa rehutano hwako. Pamusoro pamakambani emakambani emakambani emabasa uye kushanda kune muchengeti wevanoshandira kuRandstad HR company.
Mune zvimwe zviitiko, Randstad MENA anozivikanwa pamwe chete Dare rekuchengetedza ku Dubai. Uye imwe yekambani yakanakisisa muUAE. Pakupedzisira, havasi vanhu vakawanda vanoziva kuti Randstad Holding ibhizimisi re $ 28.3 bhiriyoni remadhora. Izvo zvakananga kambani yakagadzira hurumende dzeHR dzakanaka kupfuura gumis. Kusvikira panguva ino Randstad achikwira ne nzira yakasiyana-siyana yeSouth Africa inosvika kuDaily City. Kutanga, zvidzidzo zvebhizimisi zvepamusoro uye ruzivo rwevanhu Randstad ndiyo yakanakisisa nayo kubatanidzwa mitsva yevashandi vemunyika yose. Nokukurumidza kana kuti gare gare uchaona kambani yeRandstad online. Panguva iyi, iwe unogona kutanga mberi kwebasa pasina kunonoka kana iwe uri mumwe wevadzidzi uye mabhizimisi mameneja muUnited Emirates.
Zvose zvisinganzwisisiki asi kambani yekuchengetedza ANOC haina kungova sangano rekushandira. Chinangwa chekambani pakupedzisira chiri kusika pasi rose basa rinokosha kune vanotsvaka basa. ANOC ine matavi e4 ku Dubai uko iwe unogona kuuya uye iwe unogona kuvaka mabasa mune zvishoma kutaurirana chiso nechiso nevashandirwi. Kutanga nechishamiso ichi kuyananidza tapota nyora paIndaneti kana kupa mhere ku ANOC.
Sezvo iwe watumira zvakarezve muchinguva Mutungamiri wehurumende achaona kutarisa kwako zvakare. Pakupedzisira, iwe unogona kupfupisa nguva yebasa rako rakaoma kutsva nekuratidzira tarenda yako uye zvidzidzo zvekuchikoro kune ANOC. Pamberi pekutanga kambani inotarisira basa rakanaka rekuvhima basa rose munyika kwavanogona kushandisa shongwe yekubatanidza nevechauya kune vashandi muDhaibha neAud Dhabi. Iyi nzvimbo yebasa ndiyo imwe yenhengo dzakanaka dzekushandira ku Dubai.
Jerry Varghese International Careers Kugadziriswa kwevanotsvaga basa repasi rese vanotsvaga basa. Tarisa uone anotsanangura kubva kuIndia achibatsira vanhu kuwana basa.
Mabasa mu Dubai neJerry Varghese International Careers. Iyo kambani imwe yezvakanakisa pakati pevatora. Sezvazviri, Jerry Varghese iri boka rinotungamira boka rekutsvaga mukati mevashandi vanochera mazano ekutsvaga. Yakabatana nepamusoro ekubhadhara nzvimbo. Jerry Varghese ndiye anonyanya uye akakurudzirwa nevaridzi. Kune rumwe rutivi, the kambani inopa hutano hwakabatanidzwa uye hwakazara hutsva muGulf.
Panguva imwe chete apo iwe uchishandisa Jerry Varghese International Careers. Zvechokwadi, vanopa mari-inoshanda inoiswa mu Dubai business. Chimwe chinhu chinonyanya kukosha chaunogona kushanda ndedhizimusi uye mabasa ehurumende. Chinhu chokutanga chokuyeuka iyo kambani kuva nechipo chakasimba kuMiddle East uye vakashanda kwemakore anopfuura 30. Pamusoro pezvakanaka apo iwe unoita basa uchitsvaga nekambani iyi yekutsvaga. Iwe unogona kutarisira basa renyika dzakawanda uye kushandiswa kwevashandi. Kwete chete muGulf makambani asiwo pasi rose.
Kwemakore ekupedzisira e25, Jerry Varghese ave ari kubatsira vanoedza basa. Kazhinji kutaura kubva kumativi ose enyika uye izvo zvinosanganisira India nePakistan. Ihwo huzhinji hunopupurira hunobatsira kuti kambani imwe yezvakanakisisa. Iko kushandiswa kwavo kuvapo panyika kushungurudza unyanzvi mumisika kuMiddle East.
Nokuda kwechikonzero ichi, tiri kuedza kuunza kambani kwauri. Sezvinoratidzwa pamusoro pekambani yekunzwisisa kwekambani yekutsvaga mari zvakanaka. Muzvimwe zviitiko, basa rokuzvitsvaga chisarudzo chakanaka. Zvose mutambi mutsva unosangana nezvinetso nekutsvaga basa uye hupenyu muGCC.
Dubai City Company Mabasa mu Dubai Searching Services
Panguva ino, tinofanirawo kukurudzira kambani yedu. Pasina kunonoka, unogona kuwana basa mu Dubai. Panguva ino, unofanirwa kuendesazve zvinyorwa ku database yedu. Kubva 2016 pamusoro pevashandi veHNUMX vezvemabasa uye vakagadzirira vari kutevera mararamiro edu emagariro evanhu. Nechinangwa chekuisa vatsva muDhaibha, takasimbisa zvirokwazvo chimwe che iyo yakanakisisa yekudhinda maitiro ekuwana basa mu Dubai.
Kuti tiise imwe nzira, vashandi vedu vekutsvaga ndivo nyanzvi mune kubudirira kwekugadzirirwa kweMabasa Jobs. Isu tinoda nguva dzose kuva nechokwadi chekuti vashandi vedu vanova vashandi mune zvigaro, zvenguva pfupi, zvenguva yakazara kana zvikamu zvenguva-maawa muOfisi & Gasi, Marketing uye Sales, Kuchengetwa kweImbai muDhailand, Chiremba, Accounting, Banking neMari, Engineering uye Manufacturing munzvimbo kuMiddle East.
Nechinangwa che Kubhadhara zvinoda mari yebhangi ku Dubai. Kambani yedu yakasiyana nevamwe. Zvakakosha kuziva kuti nekambani yedu unogona kuwana basa muUAE 5x nekukurumidza kufananidzwa nemamwe makambani. Iwe uchada kubhadhara $ 5 chete yekunyora. Asi nokuda kwekutya kuti iwe ucharasikirwa nemari tinopa 100% kudzorerazve. Nokukurumidza kana kuti gare gare kana ukashandisa basa redu rokutsvaga basa iwe uchawana basa mu Dubai. Kusvikira panguva ino, taisa pamusoro pe 80,000 vanotsvaka basa muUAE. Pakupedzisira, tiri kutarisa kuisa 20,000 inotevera mu2018.
Danai: + 48 (0) 536 003 117
Dubai City Company iye zvino achipa mazano akanaka eMabasa mu Dubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.